I-WZX ye-WZX ye-Shaper ye-Shaper Capisole Subsole Subleale Peledale
I-WZX ye-WZX ye-Winwear Sperwear / Inkxaso yoMvelisi we-Sweewer omer / ODM / I-wholedale ephantsi ye-mode. Ilebhile ye-ackepet yesiko / uphawu.
Ingubo yangaphantsi engaphantsi
I-22% spandex i-78% nylon
I-Tank yeTank ye-Male
I-leggings eyenziwe ngokwesiko
Impahla yemihla ngemihla
Iindaba zeMveliso ye-WZX
Ikhaya > Iindaba > Iindaba zeMveliso ye-WZX
I-wzx ivulelekile i-bid ephakathi e-thaigh bodysysuit ihenda yomzimba
I-wzx yesiko lenze i-selber seatt ye-famt speen ephakathi
I-wzx ithumele i-shapersue yomzimba ohambisayo
Abathengi bethu bayayithanda indlela nje elifutshane le-selbear likhululekile kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ilaphu lolule ilaphu libonelela ngexabiso elifanelekileyo lokuyilwa kwesibane esiphezulu ngaphandle kokuziva ukwenziwa. Phakamisa i-butt kwaye ulawule i-tummy / isinqe ngokwemvelo. Ubume bomzimba oqinileyo bugcinwa endaweni. Isibindi sethu esiziinqe ezimfutshane kubafazi baya kuhamba ngomzimba onqabileyo.
I-WZX - UMFAZI WOKUGQIBELA WOKUGQIBELA
I-Shantou Washhanxung CO. I-LTD. ngumzi-mveliso oqinisekisiweyo we-BSCI, ChinaUmvelisi weHlabo, iinkampani eziphezulu ze-Showwear, ezigubungela iimitha ezili-13,500 zeemitha. Umzi-mveliso unyanzelisa umxholo wobuchule bendalo kunye nendawo yokusingqongileyo ngelixa usebenzisa itekhnoloji ephambili ukubonelela ngeenkonzo zophawu lwakho. SisinikeI-OEM&Iinkonzo ze-ODM Kubathengi abavela kwihlabathi liphela, i-USA, e-UK, CA, AU, DE, njl njl. Yintoni esinokuyenzela yona:
I-1.Sinokukulungisa iimveliso ngokweemfuno zakho
2.Sinokwenza ngokukhawuleza enze iisampulu kwaye azihlangule ngeentsuku ezisi-7.
3. Sebenzisa ilogo yelogo yebhendi yakho.
4. Singakhankanya imibala oyithandayo.
5.Sinokwenza imveliso yobukhulu be-plust enetekhnoloji engenamthungo.
6. Singazenza ngokwezifiso iipateni ozifunayo.
Ngokuxuba i-yorn eyahlukileyo ngetekhnoloji engenamthungo, imveliso inomsebenzi okhethekileyo kunye nembonakalo yemibala.
Oomatshini kwindibano yocweyo yokuthunga bangeniswa eJapan kwaye basebenza ngabasebenzi abanamava.
ILogo Ded Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu-
Sine-log picping yeSebe, elinika i-SUST YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA
Iqela loyilo eliphezulu, kunye nezakhono ezizimeleyo zemveliso, cofa amandla kwintengiso.
Siyenza njani iDibane kwaye siyichaze iGlobal
I-fielwear yethu yamkela ubugcisa obungenamthungo abangama-360. Ngetekhnoloji yoTekhnoloji yamva nje, iPowernet kwilambe yangaphandle yala maSheper iqinisekisa ukulawula okukhulu kwiindawo ezinengxaki. I-micro-fiber inikezela i-hicrober ephosakeleyo, imvakalelo yokuphefumla. Ezi ziqhushumbi zokuphelisa i-butt zinokunceda ukuqinisa ezantsi kwaye iphakamise i-buttock yakho. Uyilo lokucinezela lwethanga luqinisekisa ukuba le nto iphakathi kwethanga ayiyi kuqalisa okanye liphezulu. Ngenxa yoko, uShaper-rictur onesiqwengana wawuyile ngaphandle kwe-zipper okanye i-hook kunye neliso kwindawo yakho ye-tummy, ke ngoko ukuninika i-curve yakho ye-tummy, ke kukunceda ubonakale ubonakala umhle kwiingubo!
I-Panty yethu ye-butt yenziwe ngenqanaba eliphezulu Izixhobo, zigudileyo kakhulu& ithambile& Impilo, i-wiker-wiker-fiket switries ivumela ulusu lwakho luphefumle umoya omtsha ngokukhululekileyo. Le bodysuit lempundu-shaper isebenzisa uyilo sexy panties ngombhinqo stretchy ukuyenza ekubumbeni kakuhle lonke ixesha yaye akukho migca panty mnandi, ukuqinisekisa ukuba ziyahambelana na uhlobo umzimba ubungakanani kakhulu, yonke imihla torso / elifutshane umntla uvumelane ngokuphelele. Kuyakhanyisa ngokwaneleyo ukuba unganxitywa kakuhle imini yonke.
I-Shaper yethu ePhakamileyo yeShaist Shaist Shapfs ayinasiphoso nge-slip yethu engatyibiliki kunye neteknoloji yokuthambisa! Nokuba uyaphola kwi-PostPartum, unxibe phantsi kwengubo, okanye uphumle ekhaya ... Isilwanyana semilonto yethu ilula, iphefumle, kwaye ihlala inokwenzeka. Kwaziva sixhaswe kwaye sityibilika kuzo zonke iindawo ezifanelekileyo. Yenzelwe ukuba ingasebenzi kakuhle i-tummy yakho, iphulukane namathanga akho, kwaye igudise umva. Ukuqina kunye nokuqina kweefutshane zethu kukwenza uzive ugqibelele.
Le bodysuit shapewear wenziwe ngezinto ezithambileyo kunye bekhululekile icombuluke isisu sakho. design High-waisted kunciphisa besinqe ekudaleni Idizayini ngakumbi silhouette.3D stereo ukusika kwi kuyilo hip ukuba ukukhululwa uxinzelelo hip, akunike lo mzobo ofuna, yongeza hip ledayimenshini, a ukusebenza zokuphatha zendalo kunye nolawulo. Ezimpundwini zenziwa okubi tissue ukulungiselela ngeempundu oversized, ukwenza izinqe zenu utyebile, sexier kunye sihle ngakumbi.
Uyilo olukhethekileyo lwe-UIA owomileyo luvumela isisu sakho ukuba nendawo yokukhula enobutyebi, landela utshintsho emzimbeni wakho kwaye uhlale nawe ngalo lonke ukukhulelwa kwakho. I-leggings ibonelela ngenkxaso ethambileyo, inceda ukukhusela iintlungu zangasemva, inciphise i-pelvic engalunganga kwaye iphucule ukuma. Ubungqingqwa obufanelekileyo, bubungqina obungaboniyo-i-Thru, ukutywinwa kwe-thesmare ngentengo ye-Tear, i-byyery ethambileyo, ikugcina ukhululekile ngalo lonke ixesha. Ibhulukhwe yaseMama yenziwa ngendwangu ye-4, ipholile kwaye ifudula-wikethi, kufutshane nomzimba ngaphandle kokuthintela, unokunandipha inkululeko enkulu yokukhulelwa.
I-WZX ye-WZX ye-Wummy ye-tummy ye-tummy ye-tummwear blimming yomzimba we-subwear
Ezi ncwadi zemidlalo engenamthungo zenziwe nge-nylon kunye ne-spandex. Ilaphu likhululekile kwaye lithambile, ngokusondeleyo nolusu lwakho, akukho lungelo luphambili, akukho kuphosakele, ngaphandle kokukrala.
I-WZX SloadWear yangasese i-lebel ye-Wholesale Abathengisi beefayile
Le nkqontsi le phepha labasetyhini elingenamthungo elingenamthungo isebenzisa uyilo olukhethekileyo lwama-360, olukhanyisa kwaye lukhululekile, alunawo amathambo amabi, angenako ukuthambeka ukuba unxibe i-chineper ciner cineper ciner. I-goccum yomzimba epheleleyo yokunxiba phantsi kwengubo yakho yomtshato / i-jumpuits / ingubo / i-skirt / i-skirt / i-jeans, akukho migca ibonakalayo phantsi kwempahla yakho. Uxinzelelo oluqinileyo nolawulo lwe-tummy, kukunika ijika elishukumayo.
I-wzx yokuphefumla i-wlim yokuphefumla isilwanyana
Uyilo olungenamthungo olungenamthungo kunye nelaphu le-Supic Fablic Swerheary, Thintela i-Thigh Chaffing, iyopaque ngokupheleleyo, kwaye ayinakubonwa. I-Acta esisiseko, nxiba i-slouardwear ye-mama I-SIistband yesazisi esiyimfihlo ye-aistges, inxibe yonke kwaye emva kokukhulelwa, i-sleanarthear ye-Mana ye-Mana
Cwangcisa ngcono ishishini elingcono
Nxibelelana nentengiso kwi-XXXXX